China Metal powder akpụ haịdrọlik pịa Manufacture na Factory | Ekechukwu
Metal powder akpụ haịdrọlik pịa
Ntụ ntụ metallurgy haịdrọlik pịa na-akpọ akọrọ powder akpụ haịdrọlik pịa. Usoro a nke hydraulic presses tumadi haịdrọlik, na-etolite ngwa ngwa, obere ike oriri, ụdị ngwaahịa Ọdịdị na ezi ike.
1) The ebu isi na-tumadi mere nke 40Cr na 45 # ígwè site ibe ya bụrụ, mbịne na ezi egweri iji hụ zuru ezu nchara na kenha nkenke. Uzo ndu a na-anabata ihe di iche iche iji chebe elu site na abrasion, dika nkpuchi ndu nke ọla. Na Cr.
2) Akụkụ nke elu nke ebu ebu bụ naanị ntụmadị elu, a na-etinyekwa ọkpọ dị n'elu na slide elu; a na-edozi ebu nwanyi n'ụdị na-adịghị mma, ma arụ ọrụ na-ese n'elu mmiri ma na-emechi mmegharị anya na-arụ na usoro ịpị. Ejiri aka ike họrọ, "ntụ ntụ", mmegbu na-ese n'elu mmiri, ijigide nrụgide na-egbu oge, nkwụsị enyemaka mgbatị, wdg. Mgbe na-akpụ akpụ na ntụ ntụ, elu na ala sere n’elu adịghị mma Ebu na-ese n’elu mmiri synchronously na elu ntụmadị.
3) Usoro demoulding nwere izugbe demoulding na nchebe demoulding maka nhọrọ; nwanyi ebu na undershoot nwere imekotaotuugbo demould na nwanyi ebu wetara ala ka ozugbo hapụ ebu, na-arụsi ọrụ ike ebu mwepụta nke nwanyi ebu bara uru ka mma-echebe ngwaahịa si na-adị mfe mebiri emebi.
4) Nri elu, ngwaahịa ịpị elu na demoulding ọnọdụ iji displacement mmetụta ịchọpụta ọnọdụ na PLC usoro akara ziri ezi, na na n'ibu ngwaọrụ ịgba.
5) A mejupụtara ihe mejupụtara ihe na-abụghị nke ọla na nkwonkwo dị n'etiti efere na-ese n'elu mmiri na ngọngọ nke oghere ebu ahụ, na ihe ndị mejupụtara na-abụghị nke dịpụrụ adịpụ na akpụkpọ ụkwụ na-eri nri na ebe a na-echekwa ihe, na akụkụ ọla niile ahụ. adabaghị na ntụ ntụ.
1.The nri usoro ga-enwe 6 hoppers, na onye ọ bụla hopper ga-ebu dị iche iche akụrụngwa.
2.The hopper nwere ike bugharia, na nwere ezi akara.
3.Automatic loading nke ngwaọrụ, ọ bụla 5-10 ọrịa strok.
4.Hopper arụ ọrụ ibu nwere ike ịtọ na HMI, 1,2,3… 10, na-arụ ọrụ ọnụ.
A ga-etinye nnukwu hoppers 5.6 n'elu igwe, hopper ọ bụla nwere ike iburu 15 Kg ntụ ntụ.
A ga-eji ogidi ndị ahụ na-eduzi (ogidi) mee C45 ọkụ ibe ya bụrụ ígwè ma nwee nkpuchi mkpuchi mkpuchi chrome siri ike 0.08mm. Ma mee ọgwụgwọ ma na-ewe iwe.
JB / T3818-99《Nka na ụzụ ọnọdụ nke haịdrọlik pịa》
GB5226.1-2002 《Nchebe nke akụrụngwa-Akụrụngwa na akụrụngwa-Nkebi nke 1: Nzube teknụzụ izugbe》
GB / T 3766-2001 《General oru chọrọ maka haịdrọlik usoro》
GB17120-97 《Pịa ígwè nchekwa oru chọrọ》
JB9967-99 《Igwe akụrụngwa hydraulic》
Ọdịdị nke igwe ahụ niile na-ewepụta njikarịcha kọmpụta kọmpụta na nyocha na njedebe nwere. Ike na nkwụsi ike nke akụrụngwa dị mma, ọdịdị ahụ dịkwa mma. A na-agbanye akụkụ niile nke igwe akụrụngwa site na igwe igwe akwa Q345B nke dị elu, nke a na-agbanye ya na carbon dioxide iji hụ na ịgbado ọkụ.
Mere site Chilled igba ígwè, quenching na tempering
Ike Ike 0.8
2. Uru nke Sistemụ Servo
Nke gara aga: Automatic mmepụta akara
Osote: Automatic Ferrite Magnetik Hydraulic Press
Igwe oyi / PROP valve / servo valve
DONGXU / HUADE / Moog
Nnu ngọngọ haịdrọlik pịa